အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၌သိမှတ်မှု၏အရွယ်အစား (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အပြုအမူစွဲများတွင်သိမြင်မှု၏ Dimensional (2016)
Curr Behav Neurosci ကိုယ်စားလှယ် 2016; ၃: ၄၉-၅၇ ။
2016 ဖေဖော်ဝါရီ 20 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1007/s40473-016-0068-3
LS Morris နှင့် V. Voon
သိမြင်မှုဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုများသည် transpathological စရိုက်လက္ခဏာနှင့်ပုံတူမတူသည့်စိတ်ရောဂါအုပ်စုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အယူအဆဆိုင်ရာအယူအဆဆိုင်ရာမူဘောင်များပေးသည်။ ဤရှုထောင့်သည်ချဉ်းကပ်ပုံအမူအကျင့်စွဲခြင်းရှိသူများကိုဥပမာအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ အင်တာနက်၊ အစားအစာနှင့်လိင်များအပေါ်အဓိကလိုငွေပြမှုများကိုအခွင့်ပေးသည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြု၍ စွဲမက်ခြင်း၊ compulsivity နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုစည်းမျဉ်းကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုများကိုနားလည်ရန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံး၊
keywords: အမူအကျင့်စွဲခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊
ဥပမာအားဖြင့်လောင်းကစား၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း၊ အင်တာနက်၊ အစားအစာနှင့်လိင်စသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်မသက်ဆိုင်သောစွဲလမ်းမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်အလျင်အမြန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေသောဘုံချို့ယွင်းချက်များသက်သေအထောက်အထားများတိုးပွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။) [1, 2] ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုသိမြင်ခြင်းအားစစ်ဆေးခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြတ်၍ ဖြတ်တောက်သောလိုငွေပြမှုကို Trans-pathological characterization ဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။ ပုံသဏ္apparentlyာန်နှင့်ကွဲပြားသောအုပ်စုများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊
ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ခွဲထုတ်ရန်လိုအပ်မှုသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုသရန်ထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစရိုက်လက္ခဏာများကိုအလားအလာရှိသောအလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းသည်သိပ္ပံနည်းကျတည်ဆောက်မှုများ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုအတွက်ရောဂါအမျိုးအစားများကိုကျော်လွန်သောအယူအဆရေးရာမူဘောင်များမှတဆင့်ဖြစ်သည်။3] ။ ထိုကဲ့သို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု, compulsivity နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုစည်းမျဉ်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးကိုအသုံးပြု။ ဤချဉ်းကပ်မှု, အများဆုံးသက်ဆိုင်သော, သက်ဆိုင်သောနှင့်စွဲများအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်နိုင်သည် [3-5] ။ လက်ရှိစာတမ်း၏အာရုံသည်မည်သည့်တူညီမှုနှင့်မတူညီသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုမဆိုတည်ဆောက်ရန် SUD နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု၌ဤသိမြင်မှုဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Pubmed ၏ရှာဖွေရေး (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) အောက်ပါရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်အတူ: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒဂိမ်းသို့မဟုတ်ပြproblemနာဂိမ်းနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း။ compulsive လိင်အပြုအမူများကိုသီးခြားစီရှာဖွေခဲ့ပြီးအရက်သောက်သောရောဂါကိုခေတ္တပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း (PG) သည်ပထမဆုံးသောအပြုအမူစွဲစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ တွင်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM) တွင်သီးခြားရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများက PG ကို Pulsal control disorder ဖြစ်စေသည့်အဆင့်ဟုသတ်မှတ်သည်။6] obsessive-compulsive (OC) disturb (သို့) ဆေးဝါးနှင့်မဆိုင်သောစွဲလမ်းစေသောရောဂါ 7], ဒါပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (SUD) [နှင့်အတူတူညီမီးမောင်းထိုးပြ8] OC ရောင်စဉ်ပြordersနာများ  ။ meta-analysis သည် OC disorder (OCD) ထက် PG နှင့် OC စရိုက်များအကြားခိုင်မာသည့်အသင်းအဖွဲ့များကိုပြသခဲ့သည်။10] သည်၎င်း၏အဆိုပြုထားသည့်အမျိုးအစားကိုအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုအဖြစ်အတည်ပြုသည်။8] ။ အမှန်မှာ၊ မကြာသေးမီက DSM-5 တွင်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများအောက်တွင်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါပါ ၀ င်သည်။
အင်တာနက်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြုအမူများကိုပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာကြသော်လည်းနောက်ထပ်စရိုက်လက္ခဏာများလိုအပ်သောကြောင့် DSM-5 တွင်မပါဝင်ပါ။11]. သို့သော်အင်တာနက်နှင့်ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောစွဲလမ်းမှုအားလူသိနည်းသော်လည်း၎င်းတို့၏လက်ရှိသက်ရောက်မှုမှာမြင့်မားသည်. ယူအက်စ်တွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာသည့်လေ့လာချက်အရ ၃.၇ မှ ၁၃% အကြားပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်  ။ ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည်လူငယ်လူရွယ်များတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့လာပြီးဆယ်ကျော်သက်များတွင်သုံးဆနီးပါးပျံ့နှံ့သွားသည်။13], ယူအက်စ်အေနှင့်ဂျာမနီရှိဆယ်ကျော်သက်များ / လူငယ်လူရွယ်များ၏ ၈-၉.၃% ကိုရောက်ရှိသည် [14, 15] ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲမှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းတို့အကြားထပ်တူကျမှုများကြောင့်ဤအပြုအမူများကိုဤသုံးသပ်ချက်တွင်အတူတကွဆွေးနွေးထားပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်သဘာဝရှိသည့်ဆုတစ်ခုအတွက်အစားအစာနှင့်လိင်ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းကဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လိင်သည်အလားတူ ဦး နှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitter စနစ်များကိုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်သက်ဝင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရလိင်စွဲမှုသည်စောစီးစွာမှီခိုနေရသည့်ရောဂါဟုယူဆရသည်။16, 17] ဒါပေမယ့်အချို့သောအမျိုးအစားများဖြစ်သော "ဆိုက်ဘာလိင်" (လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ထပ်နေသည်)18]), ပိုပြီးသင့်လျော်စွာစွဲ၏စည်းကမ်းချက်များ fit . compulsive sex behavior (CSB) ဟူသောဝေါဟာရကို ၁၉၈၅ တွင်စတင်ခဲ့သည်။20] နှင့်တည်ငြိမ်သောလက္ခဏာဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဖြင့်အောင်မြင်စွာပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောကျန်းမာသည့်လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည် . CSB ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုတကမ္ဘာလုံးသဘောတူထားခြင်းမရှိပါ။22], မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကစိတ်ဆင်းရဲမှုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေး, လူမှုရေး, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်ကို ဦး တည်စေသောတိုက်တွန်းမှုများအပါအဝင်အချို့သောရောဂါရှာဖွေစံ, ဖော်ပြထားပါပြီs ကို [22-25] ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခြားသဘာဝဆုလာဘ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အစားအစာကိုမတန်တဆပြုသည့်အပြုအမူသည်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းရောဂါ (BED) တွင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သန့်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာစားသုံးမှုကာလများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီးအများအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လေ့မရှိပေ။ BED မှသိမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။26] သို့သော်အဓိကတွေ့ရှိချက်များကိုဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံစိတ်နှင့်ဆုတ်ခွာအဖြစ်စွဲ၏ဇီဝကမ္မဆိုင်းဘုတ်များ SUD ၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အမူအကျင့်စွဲ၌ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်၏တင်ပြချက် shared နောက်ခံ neuroadaptive သို့မဟုတ် psychopathological ဖြစ်စဉ်များဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတွင်ထိုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုသက်သေပြရန်အထောက်အထားအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်. အချို့သောယုံကြည်စိတ်ချရသောသက်သေသာဓကသည် PG ကိုလေ့လာခြင်း၊ အထူးသဖြင့်သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရေးကြီးသော (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ မိသားစု၊s ကို  ။ PG ရောဂါရှိသူများသည်ဆုတ်ခွာခြင်းရောဂါလက္ခဏာများခံစားရသည်။27, 28] အရက်သောက်ခြင်းရောဂါ (AUD) ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။27] ။ ထို့အပြင်လောင်းကစားအလေ့အထကိုနှေးကွေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်နေသော ၂၂၂ PG နမူနာ၏ ၉၁% သည်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော“ တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း” ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။28] ။ PG အတွက်တဏှာ  စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။30] အလားအလာရှိသောအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအားဖြည့်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည့်အရာ၊31] ။ သည်းခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ PG ရှိသူများသည်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများအပေါ်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုပြသကြသည်  နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလောင်းကစားအလောင်းအစားသို့မဟုတ်အလောင်းအစားပမာဏတိုးပွားလာခြင်းကိုသတင်းပို့ပါ။27] ။ ဤနောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းထက်အနိုင်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။27], ဤအုပ်စုတွင်စိတ်ခွန်အားနိုး orientation ကို SUD ကှာခွားနိုငျသောအကြံပြုခြင်း။
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ မိသားစုနှင့်လူမှုရေးပြproblemsနာများသည်စွဲလမ်းမှုမရှိသောရွယ်တူချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်နှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများကိုပြည့်မီသောအထောက်အထားများလည်းရှိသည်။  ။ S ကelf ၏တင်ပြချက်သည်ကောလိပ်အရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုများကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်သူများပိုမိုမြင့်မားပုံရသည်အီး  ။ သို့သော်ဤအုပ်စုတွင်ပိုမိုပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများကင်းမဲ့နေသည်။35] ။ BED တွင်သည်းခံစိတ်နှင့်ဆုတ်ခွာမှုကိုသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်လျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်နေသည်။36]; သို့သော် မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရအဝလွန် BED လူနာ ၈၁ ယောက်၏နမူနာ၏ထက်ဝက်သည်သည်ယေးလ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲလမ်းမှုတွင်သည်းခံခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။  ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအလားအလာလူမျိုးကွဲအုပ်စုများအကြံပြုခြင်း။
ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောမှီခိုမှုအပြုအမူများသည်အားနည်းချက်များရှိပုံရသည်။38] နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပြုအမူနှစ်ခုလုံး၏ဝိသေသ [[39, 40] မကြာခဏပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသိသိသာသာနှောင့်အယှက်နှင့်အတူ  နှင့်ဘဏ္orာရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးဆုံးရှုံးမှု  ။ ဤကဲ့သို့သောကြီးထွားလာသောသက်သေအထောက်အထားများ (ပစ္စည်းအနည်းအများနှင့်ဆက်စပ်သည့်စွဲလမ်းမှုများ (အနည်းဆုံး PG အတွက်) အကြားနှင့်ဆင်တူသည်) သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ပေါင်းစပ်လေ့လာမှုများဆက်လက်လိုအပ်နေသေးသည်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွင်အနှောင့်အယှက်များသည်အမြဲတမ်းတသမတ်တည်းမဖြစ်ချေ။ PG နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီသိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက်ချို့ယွင်းသရုပ်ပြ [43, 44] သို့သော်တူညီသောအတိုင်းအတာများတွင် HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခြားနားချက်မရှိသည့်သတင်းများလည်းရှိသည်။45] ။ ထို့အပြင် PG နှင့် SUD (အရက်မှီခိုမှု) ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုအရ SUD တွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်တွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသော်လည်း PG သည်အရက်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။46].
၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောသိမှတ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်များကိုထပ်မံပုံဖော်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အောက်ပါ၌, ငါတို့သီးခြားစီအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု, ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏အခန်းကဏ္examineကိုဆန်းစစ်ပါ။ ဤရွေ့ကားသုံးဆောက်လုပ်ရေးပုံထဲမှာပုံဖော်နေကြသည်။ 1တစ်ခုချင်းစီကိုအမူအကျင့်စွဲလူသိများချို့ယွင်းအပေါ်အခြေခံပြီးတည်နေရာသော။
ပြန်လည်သုံးသပ်အပြုအမူစွဲအတွက်သိမြင်မှုချို့ယွင်း၏သိထားပုံဖော်တင်ဆက်။ အနီရောင်စက်ဝိုင်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်တစ်ခုချင်းစီကိုအမူအကျင့်စွဲဘို့တိကျတဲ့, အစီရင်ခံသိမြင်မှုချို့ယွင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSB) ရှိသူများသည်ပြသခြင်းဖြစ်သည် ...
SUD သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဘက်လိုက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသော၊  ။ ကုသမှုအခြေအနေရှိနေသော်လည်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်တဏှာအကြားဆက်နွယ်မှုမှာရှိနေဆဲ48] ။ အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ PG တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်နှစ် ဦး စလုံးကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း  နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောနိုင်ရန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ချို့ယွင်းသရုပ်ပြ50, 51] ။ SUD နှင့်ရောဂါဗေဒဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့ပင်ဤလိုငွေပြမှုသည် PG ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လောင်းကစားအချက်များအပေါ်ဘက် လိုက်၍ အာရုံစိုက်မှုကိုပြသသောကြောင့်ဤလိုငွေပြမှုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။52] ။ BED ရှိအစားအစာများကိုအစောပိုင်းအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်အစားအစာများမှခွဲထုတ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၏သက်သေသာဓကများရှိသည်။53] ။ အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုဂရုပြုရန်ဘက်လိုက်မှုရှိသည်။54] နှင့် CSB သည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများကိုစောစောစီးစီးဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။55] ။ ထို့ကြောင့်ရောဂါ - တိကျတဲ့အရာဝတ္ထုမှအာရုံစူးစိုက်ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဘုံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်ထင်ရသောဤအမူအကျင့် aberrancers ဖြတ်ပြီးတွေ့ရမယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်တဏှာအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများကိုလေ့လာရန်မရှိသေးသော်လည်း SUD ၏လေ့လာမှုများမှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ရောဂါနှစ်ခုစလုံးအကြားခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများမှကြည့်ရှုရာတွင်ဘက်လိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသည်ရောဂါကိုကြိုတင်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည် (သို့) SUD စာပေမှရရှိသောအထောက်အထားများအရ၊47] ။ ဤအချက်နှင့်အညီ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုရင်းမြစ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုပြုပြင်ခြင်းသည်အလားအလာကောင်းပြီးဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။56, 57], ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်တဏှာအပေါ်အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ  သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုလေ့ကျင့်မှု၏ယေဘူယျအားဖြင့်လည်းမရှင်းလင်းပေ။59].
Impulsivity သည်အလျင်အမြန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောအပြုအမူများကို ဦး တည်နေသည့်အလားအလာရှိသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်ငြားကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအလျင်အမြန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောအပြုအမူများကို SUD အပါအဝင်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။60, 61] ။ PG နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအပါအဝင်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူယခုလည်းအမူအကျင့်စွဲ၌သရုပ်ပြ [43, 45, 62] ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်း  နှင့် BED  ။ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောစိတ်မရှည်နိုင်မှုသည်စင်္ကာပူရှိမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများတွင်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။64] နှင့် PG-YBOCS မှဖမ်းမိသောလောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်  ။ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသည့် Impulse သည် PG တွင် SUD နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။66].
Impulsivity သည် ထပ်မံ၍ ပျက်စီးသွားသောအာရုံကြောစနစ်များမှခွဲခြားထားသောထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်နေသောတည်ဆောက်မှုများအဖြစ်သို့ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။61] ။ အတိုချုပ်, မော်တာ impulsivity တုံ့ပြန်မှုတားစီးသို့မဟုတ်အရေးယူဖျက်သိမ်းမှုများအတွက်စွမ်းရည်ဖော်ပြသည်; ဆုံးဖြတ်ချက် impulsivity impulsive ရွေးချယ်မှု, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဒါမှမဟုတ်မရှိခြင်း, ကြိုတင်သက်သေအထောက်အထား (ရောင်ပြန်ဟပ် impulsivity) သို့မဟုတ်ရလဒ်တစ်ခု၏ယာယီအင်္ဂါရပ်များအားဖြင့် modulated (နှောင့်နှေးလျှော့); နောက်ဆုံးတွင်စိတ်မရှည်နိုင်ခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အားနည်းသောအချိန်မတန်မီတုန့်ပြန်မှုဆီသို့ ဦး တည်သော propensity ကိုဖော်ပြသည်။ ဒီသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရောဂါများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားတင်ပြချက်များရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်61].
Motor impulsivity သည်တုန့်ပြန်မှုမစတင်မီသို့မဟုတ်အပြီးတွင်တုံ့ပြန်မှုမစတင်မှီသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တားမြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေးယူခြင်းဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအမှတ်အသားပြုသည့် Go / NoGo အလုပ်သို့မဟုတ် Stop signal task (SST) ဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်။ SUD ရှိသူများသည် SST နှင့် Go / NoGo လုပ်ငန်းများ၌စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းနေသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ meta-analysis သည်အထူးသဖြင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်နီကိုတင်းဆေးများအတွက် opiid သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှုပြသခြင်းကိုပြသည်။67••, 68] ။ PG ၌မော်တာ impulsivity ၏လေ့လာမှုများရောထွေးရလဒ်များကိုပြသခဲ့ကြသည်။ Go / NoGo လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်69] အတူတူပင်တာ ၀ န်တစ်ခုတည်းရှိကျန်းမာေသာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မခြားနားခြင်း 67••] ။ အလားတူစွာ၊ လေ့လာမှုများစွာက SST အတွင်းခြားနားသောကျန်းမာရေးပြhealthyနာများမရှိဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။70-72] မကြာသေးမီက meta-analysis သည်လောင်းကစားသမားများအတွက် SST အပေါ်အားနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်၏အလယ်အလတ်နှင့်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း [67••] ။ ဤအုပ်စုသည် Go / NoGo လုပ်ငန်းတာဝန်အတွင်းပစ်မှတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲများပြသသောကြောင့်69] နှင့် SST အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအချိန်ကိုသွား [67••] ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့သည်ဂရုမပြုမိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။67••] ။ ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူ SST အပေါ်ချို့တဲ့ခံရဖို့အစီရင်ခံတင်ပြ [အစီရင်ခံ73] ။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကပြproblemနာဂိမ်းကစားသူများဟာ Go / NoGo အလုပ်အပေါ်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချထားပုံရတယ်။63], ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည် HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူတူပင်အလုပ်အပေါ်ပိုမိုတိကျကြောင်းပြသည်  ။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများသို့အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ထားသောကွန်ပျူတာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏ယေဘူယျအားဖြင့်ဂရုပြုရမည်။ stop cue ၏စိတ်ခွန်အားနိုးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ BED ရှိသူများသည် Go / NoGo နှင့် SST တို့တွင်တစ်သမတ်တည်းသောလိုငွေပြမှုကိုပြသနေပြီးကြားနေနှိုးဆွမှုဖြင့်မဟုတ်ဘဲအစားအစာညွန်ကြားချက်အခြေအနေတွင်သာတွေ့ရသည်။75, 76] ။ ထို့ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်ချို့ယွင်းအမူအကျင့်စွဲဖြတ်ပြီးတစ်ပုံစံတည်းလေ့လာတွေ့ရှိခံရဖို့မထင်ကြဘူး, အချို့လေ့လာတွေ့ရှိကွဲပြားခြားနားမှုအမှန်ပင်အပို - မော်တာစှမျးနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
PG, BED နှင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာကစားနည်းများတွင်သက်သေအထောက်အထားများအရ impulsivity ၏လိုငွေပြမှုသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာတွင်အဓိကကျနေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ PG နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များ [49, 77-79], ကုတင် [80, 81] နှင့်ရောဂါဗေဒဂိမ်း73] လျှော့စျေးသည်ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများထက်ပိုမိုသောအတိုင်းအတာအထိနောက်ကျသောဆုများကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုကြီးမားသော၊ နှောင့်နှေးသောဆုများထက်ပိုမိုသေးငယ်သောချက်ချင်းဆုများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲရောဂါများနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည် [68, 82, 83], ဒီချို့ယွင်း PG နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပိုပြီးသိသာဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, PG နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုမှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောနှောင့်နှေးလျှော့ဖော်ပြ  နှင့်လောင်းကစား ၀ တ္ထုသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုသမိုင်းသို့မဟုတ်အခြားမိမိကိုယ်ကိုသတင်းပေးခြင်းများကိုလျှော့တွက်ခြင်းထက်လျှော့စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။85] ။ နှောင့်နှေးခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်အလားတူ BED နှင့်မပါဘဲအဝလွန်သောဘာသာရပ်များတွင်တွေ့ရသည်။ အ ၀ လွန်သူများသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အညွှန်းကိန်းမြင့်မားသော်လည်း BED ရှိသူများသည်ငွေကြေး၊ အစားအစာဆုနှင့်အနှိပ်ခံခြင်းတို့တွင်ပိုမိုလျှော့စျေးများပြကြသည်။81] ဆုချီးမြှင့်အမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက် Impulse အတွက်ချို့ယွင်းဆိုလို  ။ သတိပြုသင့်သည်မှာ PG ရှိသူတစ် ဦး ချင်းသည်အချိန်အတိအကျကိုသိရှိနားလည်ရန်အခက်အခဲများရှိသည်။43], နှောင့်နှေးရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသေချာပေါက်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါပေမယ့်တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ခံရဖို့အချက်တစ်ချက်။
ဆုံးဖြတ်ချက် impulsivity အတွက်ချို့ယွင်း၏နောက်ထပ်သက်သေသာဓကဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သတင်းအချက်အလက်နမူနာယူသို့မဟုတ်စုဆောင်းဖို့သဘောထားကိုတိုင်းတာသောသတင်းအချက်အလက်နမူနာလုပ်ငန်းတာဝန် (IST) ၏အသုံးပြုမှုမှပေါ်ထွန်း  ။ PG နှင့် AUD တို့မှပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤရောင်ပြန်ဟပ်မှုလှုံ့ဆော်မှု၏အတိုင်းအတာတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။46], ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမူအကျင့်စွဲတလျှောက်တွင် shared လိုငွေပြမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ရောဂါဗေဒဂိမ်းကစားသူများသည် IST တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းမှုနည်းပါးသည်။73] နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီရေးဆွဲသည့်ပုတီးစေ့ကိုဆွဲသည်။87].
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူလူသားများတွင်စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အကဲဖြတ်လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်လတ်တလောတုန့်ပြန်မှုများကိုအကဲဖြတ်သည့်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းအသစ်ကို အသုံးပြု၍ မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာတွင်စိတ်ကြွဆေး၊ အရက်နှင့်နီကိုတင်းကိုမှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အားနည်းနေသော်လည်း BED နှင့်အဝလွန်သောထိန်းချုပ်မှုများရှိသူများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။88] ။ ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများသည်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိသော်လည်းနီကိုတင်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေတွင်သာရှိသည်။73] ။ SUD ၏အမျိုးမျိုးသောစောင့်ကြည့်မှု Impulsivity ကိုပြသခဲ့သည်နေစဉ်ဆေးလိပ်သောက်သူများသည်ပုံမှန်အချိန်မတိုင်မီပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသသောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေကိုမူတည်သည်။88] ။ စွဲရောဂါ၏ရောဂါများကိုဖြတ်ပြီးစောင့်ဆိုင်းခြင်း၏ရှုထောင်၏အတိုင်းအတာကိုစနစ်တကျနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမပြုမီ PG နှင့် CSB တွင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
CSB နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Impulse အတွက်လိုငွေပြမှု၏နည်းနည်းပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်  ။ Semi- စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူးကိုအသုံးပြုခြင်း, impulsivity ၏စရိုက်များ CSB များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့သူ 23 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနမူနာအတွက်ဘုံဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်  နှင့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုအရ CSB သည်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုတင်ပြသည်။55].
သိမြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်မှုအတိုင်းအတာများသည်အလုပ်အမှုဆောင်၏သမာဓိရှိမှုနှင့်မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမည့်အလားအလာရှိသောရောဂါဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ သိမှုဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို Wisconsin ကဒ် sorting task (WCST) နှင့်အတွင်းပိုင်းရှုထောင်အပိုရှုထောင် (IDED) set-shifting အလုပ်တို့ဖြင့်အကဲဖြတ်ထားသည်။ WCST သည်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲလွယ်သောပြောင်းလဲမှုကိုလိုအပ်သောပြောင်းလဲသောစည်းမျဉ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကတိုင်းတာမှုသည် perseverative အမှားများ (အနုတ်လက္ခဏာများရှိသော်လည်းတူညီသောစည်းမျဉ်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း၊ ။ အဆိုပါ IDED ပြောင်းလဲအလုပ်သိမြင်ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညွှန်ပြ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို set ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အယူအဆ set ကိုပြောင်းရွှေ့စုံစမ်း။
SUD ရှိ WCST နှင့် IDED နှစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုသည်မကိုက်ညီပါ။ ကိုကင်းကိုမှီခိုနေရသူတစ် ဦး ချင်းစီသည် WCST အပေါ်စွဲမြဲသည်။90]; သို့သော် Poly-ပစ္စည်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများသည်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မတူကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်  ။ အရက်ကိုမှီခိုနေရသော WCST အပေါ်ရှင်းလင်းသောချို့ယွင်းချက်မရှိပါ92, 93] သို့သော်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်ကျန်းမာသူတစ် ဦး အတွက်တာရှည်အမှားများဖြစ်စေသည်။94] ။ အမ်ဖီတမင်းအနေဖြင့် opioid သုံးစွဲသူများသည် IDED လုပ်ငန်း၏ ED ED အလှည့်အပြောင်းအဆင့်တွင်ချို့ယွင်းမှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။95] ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလတ်တလောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပုံတူကူးခြင်းမခံခဲ့ရသော်လည်း 96].
အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုအုပ်စုများတွင်တူညီသောကွဲလွဲမှုရှိသည်။ BED တွင်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းသက်သေအထောက်အထားများသည် set-shifting တွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။97•] သည် BC မဟုတ်သောအဝလွန်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက WCST အပေါ်မြင့်မားသောဇွဲရှိခြင်းဆိုင်ရာအမှားများ 98] နှင့်အဝလွန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် set ကိုထိန်းသိမ်းပြproblemsနာများ  နှင့် anorexia nervosa နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ  ။ သို့သော် WCST သည် PG ရှိသူများအကြားရှေ့နောက်မညီသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ PG အမျိုးသမီးအတွက်ဇွဲ၏နှစ် ဦး စလုံးတိုးမြှင့်အမှားများကို  ကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကွာခြားချက်မရှိခြင်း101, 102] သရုပ်ပြပါပြီ။ PG တွင် WCST တွင်မပါ ၀ င်သောအမှားများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည်ချို့ယွင်းချက်များကို - ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသိမြင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ PG ရှိသူများသည် IDED လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ကိုအားနည်းနေပုံရသည်။103], သော pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (memantine) နှင့်အတူတိုးတက်လာသော .
အင်တာနက်သို့မဟုတ်ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်သိသာလွယ်ကူမှုရှိသည့်လုပ်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စာပေသည်ရှားပါးသော်လည်းကြားနေနှင့်ဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများအကြားအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရမည့်အချိန်တွင် set-shifting တွင်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။54] set shifting အတွက်အထွေထွေလိုငွေပြမှုထက်လှုံ့ဆျောမှု၏တိကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကြံပြုခြင်း။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရှိသူများနှင့်ကျန်းမာသောလူပုဂ္ဂိုလ်များအကြား IDED လုပ်ငန်းတာဝန်ကာလအတွင်းကွာခြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။105•] ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအပြုအမူသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေရွေးချယ်မှု၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်း (PRR) လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုအသစ်သည်သင်ယူမှုကိုလှုံ့ဆော်မှု - ရလဒ်ပေါ်ပေါက်လာမှု၏ပြောင်းလဲမှု (သို့) ပြောင်းပြန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိုကာကိုလာမှီခိုနေရသူများသည်ယခင်ကဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ချို့တဲ့ခြင်းခံရပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆုလာဘ်အတွက်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။106] ။ သို့သော်အမ်ဖီတမင်း၊106] နှင့်နီကိုတင်း  မှီခိုမှုသည်ဤချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ပြောင်းပြန်ချို့ယွင်းသို့သော်နှစ် ဦး စလုံးဆုလာဘ်များအတွက် PG အတွက်သရုပ်ပြခဲ့ကြသည် [62, 102, 107] နှင့်အရှုံး  ရလဒ်များ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ PG ဟာ WCST မှာပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသလို့ပါ။102] ၎င်းသည်အစုလိုက်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်း (ဥပမာ dorsolateral နှင့် orbitofrontal အလွှာအသီးသီးကိုအသီးသီးအသုံးပြုခြင်း) တွင်အချိုးအစားကွဲပြားခြားနားမှုများသို့မဟုတ်တာဝန်နှစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားစိတ်ခွန်အားနိုးမှုရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ PRR သည်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် WCST သည်102] ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီက meta ပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည် PG နှင့်ဆက်နွှယ်သောအလုပ်အမှုဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကြားမှငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။108] ။ ဤသည် PG ၏လေ့လာမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခြားနားချက်တွေ့ရမယ်။ အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်မတူဘဲပုံမှန်သုတေသနတွင်အသုံးပြုသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်များသည် PG အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ PRR သည်ကိုကင်းမှီခိုခြင်း (သို့) BED အတွက်စားနပ်ရိက္ခာဆုများအတွက်ကိုကင်း (သို့) ဆုများအသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုပါကနောက်ပြန်ဆုတ်ရာတွင်အားနည်းချက်များပိုမိုပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားသမားများအတွက် PRR ကာလအတွင်းဇွဲရှိခြင်းသည်ဆုလာဘ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။107] နှင့်အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်အတွက်ဇွဲရှိခြင်းကိုလည်းကဒ်ကစားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အကျိုးရလဒ်များမှအရှုံးသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သော်လည်း PG သည်ကြာကြာမကစားနိုင်တော့ပါ။109] ။ ထို့ကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်သည် PG တွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိပုံရပြီးအထူးသဖြင့်ဤအုပ်စုတွင်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှု၏ချို့ယွင်းမှုများကိုဆုချီးမြှင့်မှု sensitivity ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
CSB တွင်ဤတာ ၀ န်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားမဖြစ်မနေစစ်ဆေးခြင်းကိုလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်ငြားလည်းစနစ်တကျပြုလုပ်ထားသောအင်တာဗျူးများမှသက်သေအထောက်အထားများသည်ဤအုပ်စုတွင်မလုပ်မနေရစရိုက်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။89] ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများနေဆဲလိုအပ်သည်။ SUD ၏ရှေ့နောက်မညီမှုများအားထင်ဟပ်ပြသခြင်းသည်ဤအထူးသဖြင့်မဖြစ်မနေရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများတွင်တသမတ်တည်းသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့် BED တွင်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အားနည်းခြင်းနှင့် PG တွင်စွဲစွဲမြဲမြဲဆုချခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းမှုအားလုံး၏ရှင်းလင်းသောစရိုက်လက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အရေးကြီးသည် PG သည်လက်ရှိတွင်သင့်လျော်သောအဆိပ်မကင်းသည့်ပုံစံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။110] ။ သို့သော် PG အတွက်7, 111] နှင့်လည်း CSB , SUD နှင့်အတူ comorbidity မြင့်မားသည်။ SUD သည် PG တွင်မျိုးရိုးဗီဇထပ်တူထပ်မျှရှိသည်။111] အရက်သေစာမှီခိုမှုအန္တရာယ်သည် PG ဖြစ်နိုင်ချေရှိမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု၏ ၁၂ မှ ၂၀% အထိရှိခြင်းနှင့်အခြေခံဘုံအကြောင်းအချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း 112, 113] ။ ထို့အပြင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိများစွာသောနမူနာများတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြorနာသို့မဟုတ်ပြproblemနာသည်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသောဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင်ပိုမိုမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။114].
PG တွင်ချက်ချင်းငွေကြေးဆိုင်ရာဆုချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း ဦး စားပေးမှုများတွင်သက်သေပြမှုများစွာရှိသည်ဟုသက်သေပြနေသော်လည်းဤနှင့်အခြားပါဝင်ပတ်သက်သောအခြားလိုငွေပြမှုများကိုလူ ဦး ရေ၏မတူကွဲပြားမှုများကြောင့်အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်ကျားမမရွေးလောင်းကစားသူများအတွက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများတွင်ကျား၊115] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှုန်းမြင့်မားသည်ဟုလည်းသတင်းပို့ကြသည့်ယောက်ျားများတွင်ထိုရောဂါသည်ပိုမိုအဖြစ်များလေ့ရှိသည်။115, 116] စိတ်ဓာတ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရောဂါများပိုမိုများပြားသောအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 116, 117] နှင့်နောက်ပိုင်းရောဂါစတင်ခြင်း  ။ ထိုကဲ့သို့သောလွှမ်းမိုးမှုများသည်ရောဂါစတင်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များသာမကထိရောက်သောကုသမှုနှင့်လက္ခဏာစီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းကြောင်းများကိုပါထိခိုက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအခြေအနေသို့မဟုတ်စိတ်သက်သာမှုကိုအစီရင်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။117].
PG ရှိအခြားရောဂါများဖြစ်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲသောစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါများသို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းစသည့်အန္တရာယ်များသောဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ပြproblemsနာများကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။118] နှင့် Impulse [119••] အသီးသီး။ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသူများတွင် ADHD ၏မြင့်မားသောနှုန်းများ (၁၂၆ အနက် ၂၁.၄%) သည်လည်းပိုမိုမြင့်မားသောသတင်းပို့နိုင်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှု (SST) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။120] နှင့်ဤအုပ်စုတွင်အဝလွန်မှုပျံ့နှံ့မှု (၂၀၇ ၏ ၁၀.၆%) သည်တုန့်ပြန်မှုအချိန်ကွာခြားမှုကိုမော်တာ impulsivity တွင်ကွဲပြားစေနိုင်သည်။119••] ။ တစ် ဦး ချင်း၏အသက်နှင့်ရောဂါစတင်ခြင်း၏အသက်သည်လည်းရောဂါတင်ဆက်မှုတွင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် PG ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည်သိမှုထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်း၊121] ။ လောင်းကစားသမားအဟောင်းများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မိသားစုပြproblemsနာများနှင့်တရားမ ၀ င်အပြုအမူများကိုအစီရင်ခံရန်နည်းပါးသည်။122] ။ ထို့အပြင်လူမျိုးနှင့်ပညာသည်လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်123] နှင့်လူမျိုးစုအုပ်စုများအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေသည်။ အဖြူ (သြစတြေးလျ) သည်တရုတ်လောင်းကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုများပြားသောစိတ်ဖိစီးမှု၊ မျှော်မှန်းထားသည့်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသည်။124] ။ ထို့ကြောင့်လူ ဦး ရေစာရင်းအရခွဲခြားနိုင်သောလူမျိုးကွဲအုပ်စုများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စေ့စေ့စပ်စပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးကုသမှုမဟာဗျူဟာများအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်အလားအလာကောင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အထူးသဖြင့် PG ၌သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုပုံစံများကိုနားလည်ရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်မှာရောဂါအမျိုးအစားများကို ဦး တည်သည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ PG (လောင်းကစားစက်များနှင့်လောင်းကစားရုံများနှင့်) ဂိမ်းကစားခြင်းသည်လိုငွေပြမှုကိုခွဲခြားသည်။125, 126] လောင်းကစားရုံလောင်းကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ထင်ရသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲလ်လောင်းကစားသမားများအားမော်တာထိုးထကြွခြင်းများ 109] ။ ကဒ်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်မဟာဗျူဟာမဟုတ်သောလောင်းကစားခြင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာကျသည့်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် (ဥပမာကဒ်ဂိမ်းများ၊ အန်စာတုံးဂိမ်းများနှင့်အားကစားလောင်းကစားခြင်း)  ။ ဤအုပ်စုနှစ်စုကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၊ slot machine အသုံးပြုသူများသည်တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှု၏ Go / NoGo လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်ကော်မရှင်အမှားများပိုပြုလုပ်သည်။109] ။ ယေဘုယျစစ်ဆေးမှုများတွင်မဟာဗျူဟာမဟုတ်သောအဖွဲ့ငယ်များသည်ပိုမိုအားနည်းသွားပုံရသည်။45] နှင့်အချို့သောဆွေးနွေးတင်ပြလိုငွေပြမှုမောင်းနှင်လိမ့်မည်။
စွဲလမ်းဖြတ်ပြီး disordered သိမှတ်ခံစားမှု၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှာတော့ကျနော်တို့ထင်ရသောမတူကွဲပြားအုပ်စုများ၏နားလည်မှုတစ်ခု transpathological နှင့်ရှုထောင်ချဉ်းကပ်သရုပ်ပြပါ။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားသောသက်သေအထောက်အထားများကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် Table1,1လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အမူအကျင့်စွဲဖြတ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်များအတွက်နှောင့်အယှက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက် impulsivity ကြောင်းဖော်ပြသည်သော။ စိတ်ခွန်အားနိုးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု၏လွှမ်းမိုးမှုမှာရှင်းနေပါသည်။ ချို့ယွင်းမှုများသည်ရောဂါနှင့်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထု (ဥပမာ - BED မှအစားအစာ) ပတ်ပတ်လည်တွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ သိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုဥပမာ၊ ဂရုပြုဘက်လိုက်မှုနှင့်တပ်မက်ခြင်းတို့သည်ရောဂါစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၏အကြောင်းအရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုတ်မဟုတ်ကိုရှင်းလင်းရန်မလွယ်ကူသေးပါ။ အတူတူ, သိမြင်မှုဆောက်လုပ်ရေးထွန်းသစ်စစိတ်ရောဂါအုပ်စုများ၏ phenotypic စရိုက်လက္ခဏာတွေများအတွက်အသုံးဝင်သောမူဘောင်သည်။
ဒေါက်တာ Laurel Morris သည် MRC Doctoral Training Grant ထံမှတင်ပြချက်များကိုတင်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Valerie Voon ကသူမမှာအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမရှိဘူးလို့ကြေငြာခဲ့တယ်။
လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးနှင့် Informed Consent
ဤဆောင်းပါးသည်စာရေးသူတစ် ဦး မှလုပ်ဆောင်သောလူသားသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုမပါ ၀ င်ပါ။
ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ငွေကောက်ခံ on ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် စွဲ
အဓိကအရေးပါမှု၏••အရေးပါမှု၏•: မကြာသေးမီကထုတ်ဝေအထူးစိတျဝငျစားစာတမ်းများ, အဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြ
1. Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲ၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162 (8): 1403-13 ။ [PubMed]
၂။ Everitt BJ၊ Dickinson A၊ Robbins TW ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ Brain Res Brain Res Rev. 2; 2001 (36-2): 3-129 ။ [PubMed]
et al 3. Robbins TW ။ Impulse နှင့် compulsive ၏ Neurocognitive endophenotypes: ရှုထောင်စိတ်ရောဂါကုသမှုဆီသို့ ဦး တည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2012; 16 (1): 81-91 ။ [PubMed]
4. Lopez M က, COMPTON W, Grant B, ရောဂါရှာဖွေခွဲခြားအတွက်ဂျေရှုထောင်ချဉ်းကပ်မှု: တစ်ဝေဖန်အကဲဖြတ်။ Int J ကိုနည်းလမ်းများစိတ်ရောဂါ Res ။ 2007; 16 (S1): S6-7 ။ [PubMed]
et al 5. Fineberg NA ။ လူ့ neurocognition အတွက်တိုးတက်မှုအသစ်: လက်တွေ့, မျိုးဗီဇနှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ် Impulse နှင့် compuls ၏ဆက်စပ်မှု။ CNN Spectrums ။ 2014; 19 (1): 69-89 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6. Ibanez A, Blanco ကို C, Saiz-Ruiz ဂျေ Neurobiology နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏မျိုးရိုးဗီဇ။ စိတ်ရောဂါအမ်း။ 2002; 32 (3): 181-5 ။
7. Potenza MN, Kosten TR, Rounsaville BJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ Jama-J ကို Am Med Assoc ။ 2001; 286 (2): 141-4 ။ [PubMed]
8. Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်။ Philos Trans တော်ဝင် Soc B-Biol သိပ္ပံပညာ။ 2008; 363 (1507): 3181-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 9. Blanco ကို C ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: စွဲသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်? Semin Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6(3): 167-76 ။ [PubMed]
10. Durdle H ကို, Gorey KM, Stewart က SH ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် obsessive-compulsive စရိုက်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ် meta-analysis သည်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 2008; 103 (2): ။ 485-98 ။ [PubMed]
၁၁။ အသင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: DSM-5 ။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ ၂၀၁၃ ။
12. Aboujaoude အီး။ ပြproblemနာများအင်တာနက်အသုံးပြုရန်အလားအလာရှိသောအမှတ်အသားများ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၂၅၁၃ ယောက်ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။ CNN Spectrums ။ 2,513; 2006 (11): 10-750 ။ [PubMed]
13. Haagsma MC, Pieterse ME, Peters O. နယ်သာလန်၌ပြသနာများသောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများပြားလာခြင်း။ Cyberpsychology Behav Soc Netw ။ 2012; 15 (3): 162-8 ။ [PubMed]
et al 14. Grusser က SM ။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွန်ပျူတာအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်။ Wien ကလင်း Wochenschr ။ 2005; 117 (5-6): 188-95 ။ [PubMed]
၁၅။ Gentile D. ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုအသက် ၈ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်းအမျိုးသားအဆင့်လေ့လာမှု။ Psychol သိပ္ပံ။ 15; 8 (18): 2009-20 ။ [PubMed]
16. Cordasco CF. လိင်စွဲ။ NC Med ဂျေ 1993; 54 (9): 457-60 ။ [PubMed]
၁၇ ။ ကနေဒီအီးလိင် - စွဲရောဂါသည်လိင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသည်။ သူနာပြုသင်တန်း။ 17; 1991 (16): 8 ။ [PubMed]
18. Delmonico DL, Carnes PJ ။ Virtual Sex စွဲလမ်းမှု - Cybersex သည်ရွေးချယ်ရမည့်ဆေးဖြစ်လာသည်။ Cyberpsychol Behav ။ 1999;2(5): 457-63 ။ [PubMed]
19. Plant M, Plant M. လိင်စွဲ - စိတ်ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ J Subst အသုံးပြုမှု။ 2003; 8 (4): 260-6 ။
20. Quadland MC ။ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - ပြproblemနာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1985; 11 (2): 121-32 ။ [PubMed]
21. Coleman အီး, et al ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာလိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ လိင်လိင် Behav ။ 2010; 39 (5): 1045-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22. Raymond NC, et al ။ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်နှစ်ခု - naltrexone နှင့် serotonin တို့မှအတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတားဆီးသည်။ Int Clin Psychopharmacol ။ 2002; 17 (4): 201-5 ။ [PubMed]
23. Coleman အီး, et al ။ Nefazodone နှင့် nonparaphilic compulsive လိင်အပြုအမူများအားကုသခြင်း - နောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 61 (4): 282-4 ။ [PubMed]
၂၄။ Coleman E၊ Raymond N, McBean အေ။ မဖွယ်မရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ Minn Med ။ 24; 2003 (86): 7-42 ။ [PubMed]
25. Derbyshire KL, Grant က JE ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Behav စွဲ။ 2015;4(2): 37-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26. Voon V. မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါအတွက်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု - ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ပြန်ပေးဆွဲခြင်း။ CNS Spectr ။ 2015; 20 (6): 566-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၇။ Blaszczynskia A၊ Walker M, Sharpea L, Nowerb L. ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်းတွင်ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းဖြစ်စဉ်။ int Gambl လုံး။ 27; 2008 (8): 2-179 ။
28. Rosenthal RJ, Lesieur အိပ်ချ်။ ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ နံနက် J ကိုစွဲ။ 2010; 1 (2): 150-4 ။
et al 29. က de ကက်စထရို V ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်အရက်သမားအကြားတဏှာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များတစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 2007; 32 (8): 1555-64 ။ [PubMed]
et al 30. Tavares H ကို။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်အရက်သမားအကြားတဏှာ၏နှိုင်းယှဉ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29 (8): 1427-31 ။ [PubMed]
31 ။ Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35 (1): 217-38 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လောင်းကစားတွင် Griffiths M. သည်းခံစိတ် - အထီးသီးလောင်းကစားသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒကို အသုံးပြု၍ ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာ။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 32; 1993 (18): 3-365 ။ [PubMed]
33. ယန် SC, Tung CJ ။ ထိုင်ဝမ်အထက်တန်းကျောင်းတွင်အင်တာနက်စွဲသူများနှင့်စွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ကွန်ပျူတာ Hum Behav ။ 2007; 23 (1): 79-96 ။
34. လီ SM, Chung TM ။ အင်တာနက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ။ ကွန်ပျူတာ Hum Behav ။ 2006; 22 (6): 1067-71 ။
35. Widyanto L, Griffiths အမ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ Int J စိတ်ကျန်းမာရေးစွဲ။ 2006;4(1): 31-51 ။
36. Davis က C, Carter က JC ။ တစ် ဦး စွဲရောဂါအဖြစ် compulsive overeating ။ သီအိုရီနှင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2009; 53 (1): 1-8 ။ [PubMed]
et al 37 Gearhardt AN ။ မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်လူနာတွေအတွက်အစားအစာစွဲဆောက်လုပ်ရေး၏တစ် ဦး စာမေးပွဲ။ Int J ကို Disord စားပါ။ 2012; 45 (5): 657-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 38 Frascella J ကို။ မျှတသော ဦး နှောက်အားနည်းချက်များသည်အဆိပ်အတောက်ကင်းစေသည့်စွဲလမ်းမှုများအတွက်အဆစ်အသစ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ စှဲလမျးသူ Rev. 2010;2(1187): 294-315 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39. Spurrier M၊ Blaszczynski အေ။ J ကို Gambl လုံး။ 2014; 30 (2): 253-76 ။ [PubMed]
40. King DL, Delfabbro PH ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၏သိမှုစိတ်ပညာ။ Clin Psychol ဗျာ 2014; 34 (4): 298-308 ။ [PubMed]
41 DeCaria CM ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ရောဂါ, neurobiology နှင့်ကုသမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါ။ 1996; 57: 80-4 ။ [PubMed]
42. Grant JE, Kim SW ။ လူကြီး 131 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 62 (12): 957-62 ။ [PubMed]
43. Goudriaan AE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များကို: အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ စှဲလမျးသူ။ 2006; 101 (4): 534-47 ။ [PubMed]
et al 44 Ledgerwood DM ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ J ကို Gambl လုံး။ 2012; 28 (1): 89-103 ။ [PubMed]
et al 45. Manning V ကို။ အာရှရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ int Gambl လုံး။ 2013; 13 (3): 403-16 ။
et al 46. လောရင့် AJ ။ ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများသည်အရက်ကိုမှီခိုနေရသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စိတ်လိုက်မာန်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လိုငွေပြမှုကိုမျှဝေသည်။ စှဲလမျးသူ။ 2009; 104 (6): 1006-15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47. Field M, Cox WM စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု - ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2008; 97 (1-2): 1-20 ။ [PubMed]
48. Field M, Munafo MR, Franken IHA မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိc္တပ်မက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှု၏ meta-analytic စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Psychol Bull ။ 2009; 135 (4): 589-607 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49. Ledgerwood DM, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မကင်းသည့်ရောဂါများကိုလောင်းကစားသူများအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်သည်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2009; 105 (1-2): 89-96 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဂါဗေဒကစားသမားအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများ၏ Melamed အယ်လ် Neuropsychological အကဲဖြတ် 50. Rugle L ကို။ J ကို Nerv Ment Dis ။ 1993; 181 (2): 107-12 ။ [PubMed]
et al 51 Specker SM ။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလောင်းကစားသမားအတွက် Impulse ကိုထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရောဂါ။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;7(4): 175-9 ။ [PubMed]
et al 52 Vizcaino EJV ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ Maintenance ။ Psychol စွဲလမ်း Behav ။ 2013; 27 (3): 861-7 ။ [PubMed]
et al 53 Schmitz က F ။ မူးရူးအစာစားရောဂါအတွက်အစားအစာတွေကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2014; 80: 70-80 ။ [PubMed]
54. Zhou ZH, Yuan GZ, Yao JJ ။ အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲပုံများနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲစွဲသူများရှိသူများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လိုငွေပြမှုများကိုသိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု။ Plos One ။ 2012;7(11): e48961 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55. Mechelmans DJ သမား။ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အာရုံကိုဘက်လိုက်ခြင်း။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(8) [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56. Cox BJ, Enns MW, Michaud V. South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင်နှင့်ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားခြင်းကိုလူထုအခြေပြုစစ်တမ်းတစ်ခုတွင် DSM-IV အခြေပြုအင်တာဗျူးအကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Can J ကို Psychiatr Rev Can Can Psychiatr ။ 2004; 49 (4): 258-64 ။ [PubMed]
et al 57 Schoenmakers TM ။ abstinent အရက်လူနာအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပြုပြင်မွမ်းမံသင်တန်း၏လက်တွေ့ထိရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2010; 109 (1-3): 30-6 ။ [PubMed]
et al 58. Attwood AS ။ စီးကရက်သောက်သူများတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်လေ့ကျင့်မှု။ စှဲလမျးသူ။ 2008; 103 (11): 1875-82 ။ [PubMed]
et al 59. Schoenmakers T က။ အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူများတွင်ဂရုမစိုက်ဘဲဘက်လိုက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ စှဲလမျးသူ။ 2007; 102 (3): 399-405 ။ [PubMed]
et al 60 Moeller FG ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158 (11): 1783-93 ။ [PubMed]
61 Dalley JW, Everitt BJ, Robbins TW ။ Impulse, compulsivity နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု။ Neuron ။ 2011; 69 (4): 680-94 ။ [PubMed]
62. Patterson JC, Holland J, Middleton R. Neuropsychological performance, impulsivity နှင့် comorbid စိတ်ရောဂါရောဂါကို CORE Inpatient Treatment Centre တွင်ကုသမှုခံယူနေသောလူနာများအားရောဂါကုသမှုခံယူသည်။ တောင်ပိုင်း Med ဂျေ 2006; 99 (1): 36-43 ။ [PubMed]
et al 63 Luijten M က။ ပြproblemနာဂိမ်းများအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res Neuroimaging ။ 2015; 231 (3): 262-8 ။ [PubMed]
64. လူမျိုးခြား DA ။ လူငယ်များအကြားရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှု: နှစ်နှစ် longitudinal လေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2011; 127 (2): E319-29 ။ [PubMed]
et al 65. Blanco ကို C ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009; 167 (1-2): 161-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66. Castellani B၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ၀ တ်ပြုသူများအားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသောလောင်းကစားပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း စိတ်ရောဂါကုသသူ။ 1996; 47 (3): 298-9 ။ [PubMed]
67. ••။ Smith က JL, et al ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲအတွက်အမူအကျင့်တားစီးအတွက်လိုငွေပြမှု: meta-analysis သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2014; 145: 1-33 ။ [PubMed]
68. Verdejo-Garcia A၊ Lawrence AJ, Clark L. Impulsivity သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြordersနာများအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသား - အန္တရာယ်မြင့်မားသောသုတေသန၊ ပြreviewနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2008; 32 (4): 777-810 ။ [PubMed]
et al 69 Kertzman S ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် go-no-go စွမ်းဆောင်ရည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2008; 161 (1): 1-10 ။ [PubMed]
70. လောရင့် AJ ။ အရက်သေစာမှီခိုခြင်းနှင့်ပြproblemနာလောင်းကစားအတွက်စိတ်မတိုစေခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီး။ စိတ်ပညာ။ 2009; 207 (1): 163-72 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
71 Lipszyc J ကို, Schachar R. Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ပညာ: အမှတ်တိုင် signal ကိုတာဝန်သုံးပြီးလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ J ကို Int Neuropsychol Soc ။ 2010; 16 (6): 1064-76 ။ [PubMed]
72. Grant JE, et al ။ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောလောင်းကစားသမားများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ရွေးချယ်မှုနည်းပါးခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2011 ခုနှစ်; 189 (1): 115-20 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
73 Irvine MA ။ ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းကစားအတွက်ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက် Impulse ။ Plos One ။ 2013; 8 (10): e75914 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 74 Sun က DL ။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုတားစီးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ CNN Spectrums ။ 2009; 14 (2): 75-81 ။ [PubMed]
et al 75 Mobbs အို။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းရောဂါရှိသူနှင့်မပါဘဲအဝလွန်သူများအတွက်သိမြင်မှုချို့တဲ့ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်ကိုအသုံးပြု။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ အစာစားချင်စိတ်။ 2011; 57 (1): 263-71 ။ [PubMed]
et al 76 Svaldi J ကို။ မူးရူးအစားအစာရောဂါအထွေထွေနှင့်အစားအစာ - တိကျတဲ့ inhibitory လိုငွေပြမှု။ Int J ကို Disord စားပါ။ 2014; 47 (5): 534-42 ။ [PubMed]
နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားရောဂါဗေဒကစားသမားအတွက် 77. Miedl SF, Peters J ကို, Buchel C. ပြောင်းလဲအာရုံကြောဆုလာဘ်ကိုယ်စားပြု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 69 (2): 177-86 ။ [PubMed]
78. Dixon က MR, Marley J ကို, Jacobs EA ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများကလျှော့နှောင့်နှေး။ စအို J ကို Apple က Behav ။ 2003; 36 (4): 449-58 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79. Petry မိုင်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူနှင့်မပါဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမား, လျှော့စျေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းမှာဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ J ကိုမူမမှန် Psychol ။ 2001; 110 (3): 482-7 ။ [PubMed]
80 et al Davis က။ ချက်ချင်းအပျော်အပါးများနှင့်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များ။ အရက်မူးခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ neuropsychological လေ့လာမှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2010; 54 (1): 208-13 ။ [PubMed]
et al 81 Manwaring JL ။ အရက်အလွန်အကျွံမစားသောရောဂါရှိသည့်နှင့်မပါသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှော့ချခြင်း - ကွဲပြားခြားနားခြင်းထက်ယေဘုယျအားဖြင့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။ Psychol Rec ။ 2011; 61 (4): 561-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
82. Ohmura Y, Takahashi T, Kitamura N. စီးကရက်သောက်သူများ၏နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောငွေကြေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 182 (4): 508-15 ။ [PubMed]
et al 83. MacKillop J ကို။ နှောင့်နှေးဆုလာဘ်လျှော့ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ: meta-analysis သည်။ စိတ်ပညာ။ 2011; 216 (3): 305-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 84. Albein-Urios N ကို။ ကင်းထိုးခြင်းနှင့်ကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း - ကိုကင်း - သွေးဆောင်နိုင်သည့် neurotoxicity အတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2012; 126 (1-2): 1-6 ။ [PubMed]
85. Alessi သည် SM, Petry မိုင်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားမှုပြင်းထန်မှုကိုနှောင့်နှေးလျှော့စျေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 2003; 64 (3): 345-54 ။ [PubMed]
et al 86 Bickel WK ။ ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အခြားရောဂါနှင့်ဆက်နွှယ်သောအားနည်းချက်များကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်နှောင့်နှေးနေသောအားဖြည့်ဆေးများကိုအလွန်အကျွံလျှော့ချခြင်း - ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထား။ Pharmacol Ther ။ 2012; 134 (3): 287-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 87 Djamshidian A ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှု - ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာသည်များသည်ကောက်ချက်သို့ချက်ချင်းရောက်သွားသလား။ Mov Disord ။ 2012; 27 (9): 1137-45 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 88 Voon V ။ ကြွက်များအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်တစ်ခုဝတ္ထု analogue အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲခြင်းနှင့်မူးရူးစားရောဂါ "စောင့်ဆိုင်း" Impulse တိုင်းတာခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 75 (2): 148-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
89 Raymond NC, Coleman အီး, Miner MH ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 44 (5): 370-80 ။ [PubMed]
et al 90. Woicik PA ဆိုပြီး။ ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံသည် Wisconsin မှကဒ်ခွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် neurocognitive ဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ Neuropsychologia ။ 2011; 49 (7): 1660-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
91. Grant က S ကို, Contoreggi ကို C, လန်ဒန် ED ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းနေသည်။ Neuropsychologia ။ 2000; 38 (8): 1180-7 ။ [PubMed]
92. Nowakowska K, Jablkowska K, Borkowska A. အရက်မှီခိုမှုရှိသည့်လူနာများတွင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု။ စိတ်ရောဂါ pol ။ 2007; 41 (5): 693-702 ။ [PubMed]
93. Sullivan က EV ။ ၀ ီစဆင်ဆင်ကဒ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းစမ်းသပ်မှု၏အချက်များသည် schizophrenia နှင့်နာတာရှည်အရက်သောက်ခြင်းများအတွက်တိုကျရိုကျ - အမြှေး function ကိုတိုင်းတာသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1993; 46 (2): 175-99 ။ [PubMed]
94. Lyvers MF, Maltzman I. Wisconsin ကဒ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ရွေးချယ်သောသက်ရောက်မှုများ။ Br J ကိုစွဲ။ 1991; 86 (4): 399-407 ။ [PubMed]
et al 95 Ornstein TJ ။ နာတာရှည်အမ်ဖီတမင်းနှင့်ဘိန်းဖြူအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက်သိမှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ profile များကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 23 (2): 113-26 ။ [PubMed]
96. Ersche KD ။ amphetamine နှင့် opiate မှီခိုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်အမှုဆောင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်မှု၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31 (5): 1036-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
97. •။ ဝူ M က, et al ။ အစားအသောက်မူမမှန်ရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့တွင်အမျိုးမျိုးသော set-shift စွမ်းရည် - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ။ Psychol Med ။ 2014; 44 ((16): 3365-85 ။PubMed]
98. Duchesne M က။ အဝလွန်အစာစားရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏အကဲဖြတ်။ ဗြာ Bras Psiquiatr ။ 2010; 32 (4): 381-8 ။ [PubMed]
et al 99. Aloi M က။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဗဟိုရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲများ - အရက်သောက်ခြင်းရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Anorexia Nervosa ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှု BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 15:6။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100. Alvarez-Moya EM ။ အမျိုးသမီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့် bulimia nervosa လူနာများအကြားအလုပ်အမှုဆောင်: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ J ကို Int Neuropsychol Soc ။ 2009; 15 (2): 302-6 ။ [PubMed]
101. Hur JW, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါထပ်တူဖြစ်ပါသလား တစ် ဦး က neurocognitive ရှုထောင့်။ CNN Spectrums ။ 2012; 17 (4): 207-13 ။ [PubMed]
102. Boog M က et al ။ လောင်းကစားသမားများတွင်သိမြင်မှုပျော့ပျောင်းမှုသည်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ လူ့ Neurosci ရှေ့။ ၂၀၁၄; ၈ ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103. Odlaug BL, et al ။ လက်တွေ့ပြင်းထန်မှု၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူလောင်းကစားသမားများအတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏တစ် ဦး က neurocognitive နှိုင်းယှဉ်။ Psychol Med ။ 2011; 41 (10): 2111-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
104. Grant က je, et al ။ Memantine ကရှေ့ပြေးလေ့လာချက်တစ်ခုအရလောင်းကစားခြင်းတွင်လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်သိမြင်မှုအားနည်းခြင်းများကိုလျှော့ချရန်ကတိပေးသည်။ စိတ်ပညာ။ 2010; 212 (4): 603-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
105. •။ Choi SW, et al ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများတွင်တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ - ထိုးထွင်းမှုနှင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ J ကို Behav စွဲ။ 2014;3(4): p ။ 246-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
106. Ersche KD, et al ။ နာတာရှည်ကိုကင်းသည်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲလူသားများအားတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 197 (3): 421-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 107. က de Ruiter ကို MB ။ တုန့်ပြန်သည်းခံခြင်းနှင့်အထီးပြproblemနာလောင်းကစားသမားများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုနှင့်အပြစ်ပေးဖို့ ventral prefrontal sensitivity ကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (4): 1027-38 ။ [PubMed]
108. Achab S, Karila L, Khazaal Y. ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: လက်တွေ့နမူနာများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် neuro-functional ဖြစ်စေလေ့လာမှုများအပေါ် update ကို။ Curr Pharm Des ။ 2014; 20 (25): 4000-11 ။ [PubMed]
109. Goudriaan AE, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - လောင်းကစားသမားများ၊ အရက်မှီခိုသူများ၊ Tourette syndrome ရောဂါရှိသူများနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Cogn ဦး နှောက် Res ။ 2005; 23 (1): 137-51 ။ [PubMed]
110. Limbrick-Oldfield EH, van Holst RJ, Clark L. Fronto-striatal dysregulation, မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - တသမတ်တည်းရှေ့နောက်မညီမှု။ Neuroimage Clin ။ 2013; 2: 385-93 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ je, Chamberlain SR ပေးသနား။ လောင်းကစားရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နဲ့ဆက်ဆံရေး: nosological တည်းဖြတ်မူများကိုနှင့်ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2015; 24 (2): 126-31 ။ [PubMed]
et al 112. Slutske WS ။ အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုခြင်းတို့အတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 57 (7): 666-73 ။ [PubMed]
113. Grant JE, Kushner MG, Kim SW ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်သေစာရောဂါ။ Alcohol Res ကျန်းမာရေး။ 2002; 26 (2): 143-50 ။
et al 114. Hammond ဟာ CJ ။ ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှု၊ ပြproblemနာ - လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောစူးစမ်းလေ့လာမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားဖြစ်သည်။ J ကို Behav စွဲ။ 2014;3(2): 90-101 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
115. Potenza MN ။ လောင်းကစားဟယ်လင်းကို အသုံးပြု၍ ပြaနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတွင်ကျား - မကွဲပြားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158 (9): 1500-5 ။ [PubMed]
et al 116. Grant က, ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျား -related လက်တွေ့နှင့် neurocognitive ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2012; 46 (9): 1206-11 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 117. Blanco ကို C ။ subclinical နှင့် DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ Psychol Med ။ 2006; 36 (7): 943-53 ။ [PubMed]
118. Leppink EW, Grant က je ။ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်လောင်းကစားခြင်း၊ လက်တွေ့၊ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 27 (1): 16-24 ။ [PubMed]
119. ••။ Grant et al, et al ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်း။ Acta စိတ်ရောဂါ Scand ။ 2015; 131 (5): 379-86 ။ [PubMed]
et al 120 Chamberlain SR ။ ပြHနာလောင်းကစား၏လက်တွေ့နှင့်သိမြင်ရှုထောင့်အပေါ် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများ၏သက်ရောက်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 57: 51-7 ။ [PubMed]
121. ကုန်သည်များအသင်း RA, Potenza MN ။ Neurode ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Impulse နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစားခြင်း။ J ကို Gambl လုံး။ 2003; 19 (1): 53-84 ။ [PubMed]
et al 122. Potenza MN ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားသမားများ၏လက္ခဏာများသည်လောင်းကစား ၀ ယ်လိပ်စာခေါ်ခြင်း။ J ကို Gambl လုံး။ 2006; 22 (2): 241-54 ။ [PubMed]
123. Petry NM, Rash CJ, Blanco C. ပြproblemနာတွင်လောင်းကစားခြင်းအခြေအနေနှင့်အရက်သေစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကုသမှုကိုရှာဖွေနေသည့်ရောဂါဗေဒကစားသမားစာရင်း။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2010; 18 (6): 530-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
124. တန် CSK, Oei TP ။ လောင်းကစားခြင်းကိုသိခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကသုခချမ်းသာသည်ရူပဗေဒနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပြperနာများကြားတွင်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်အဖြူနှင့်တရုတ်ပြproblemနာကိုလောင်းကစားသူများအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ Psychol စွဲလမ်း Behav ။ 2011 ခုနှစ်, 25 (3): 511-20 ။ [PubMed]
et al 125 ဗန် Holst RJ ။ အဘယ်ကြောင့်လောင်းကစားသမားအနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်သိမြင်မှုနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်များပြန်လည်သုံးသပ်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2010; 34 (1): 87-107 ။ [PubMed]
et al 126. Grant က။ မဟာဗျူဟာနှင့် Non- မဟာဗျူဟာမြောက်လောင်းကစားသမားများအတွက် Neurocognitive ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ တိုးတက်မှု Neuro-Psychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 38 (2): 336-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]